OromiaTimes: Beeksisa ABO Konyaa Swiidiin: Kabaja Guyyaa Gootota Oromoo
Beeksisa ABO Konyaa Swiidiin: Kabaja Guyyaa Gootota Oromoo
Bitootessa 16/ 2009
Gara Hawaasa Oromoo Hunda Istockholmi
fi Naannoo Jiraatan
ABOn konyaa Siwidin waggaa waggaan guyyaa gotoota Ebla 15 kabajuufi aadaa godhate jira. Baraanas adaa kana iitti fuufuun guyyaa gotoota kabajuufi qophii irraa jira. Gotootii keenyaa bilisummaa saba keenyaa fi jechaa lubu isaani dabarsani kennaniru ammaas kennaa jiru. Kanaf jecha guyyya kabajaamaa kana akka waliin yaadanu fi waammicha laamuuma isinni gona. Oromoon laamuuman itti dhaagahamu hunda gaafa Ebla 15 sa’a 16,30-18 Sergels Torg argaamuun sa’a tokkoo fi guchaa qabsissu fi akkasummas kayyoo gotooti itti warregamanii fi warregamaa jiran akka ulfiina keeyaa waliin laatnuuf kabajaa wajjin isin afeera. Sagantaan Sergels TORG itti fuufuun waliin teessoo armaan gaadii aaddemun sagantaa keennaa itti fuufina.
124 71 Bandhagen.(Älvsjö Baden)
Kana mallees madda galii ABO Loterry FDG gaabaa irratti rabsee jira . Lottery kun gaafa Ebla 15/ 2009 baha. WBO dhaabachuun hawwii gotooti keenyaa irratti warregamani fi saba Oromoo fixaan baasuuf Lottery kana biitaadha. Lottery kana jaal Galaana yaadata itti bilbilun argaachu dandeesu.Telfoon jaal Galaana- 070-9885620 dha.
KHG ABO, konyaa
Gepostet von OromiaTimes an 9:49 am